Adora & etc.: June 2013
ဒီနှစ်ကုမ္မဏီရဲ့ Dinner & Dance Theme က "Masquerade Ball" လို့ကြေငြာလာပါတယ်။ "Masquerade Ball" ကို မြန်မာလို တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်ရင်တော့ အယောင်ဆောင် ကပွဲသဘင်လို့ ဆိုရပါမယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကပွဲလာတဲ့ သူတွေက ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်း မသိနိုင်အောင် မျက်နှာဖုံး (Mask) တွေဝတ်ပြီး လာကြလို့ပါ။
Masquerade Ball တွေက ၁၅ရာစု လောက်ကစပြီး ပြင်သစ် နိုင်ငံကစတယ်လို့ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ ၁၆၊၁၇၊၁၈ ရာစုနှစ်များမှာ တခြားဥရောပနိုင်ငံများအထိ ပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် အီတလီနိုင်ငံ ဗင်းနစ်မြို့က ဗင်းနစ်မြို့သူ မြို့သားများရဲ့ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအဖြစ် ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မဆို အီတလီနိုင်ငံ ဗင်းနစ်မြို့က အစပြုတယ်တောင် ထင်ခဲ့တာပါ။ သူငယ်ချင်းတွေ ဥရောပနိုင်ငံတွေ အလည်အပတ်ထွက်လို့များ ပြန်လာပြီဆို ဗင်းနစ်မြို့က Mask လှလှလေးတွေ လက်ဆောင်ပါလာတတ်တာကိုး။
တချို့သမိုင်းအထောက်အထားများ အရ မျက်နှာဖုံးစွပ် ကပွဲတွေဟာ လူ့အထက်တန်းလွှာ မင်းစိုးရာဇာနဲ့ သူဋ္ဌေးများရဲ့ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲပါတဲ့။ တချို့တွေကတော့ အထက်တန်းလွှာများနဲ့ အောက်ခြေလူလတ်တန်းစားများ တွေ့ဆုံမိတ်ဆက်ရာ၊ ဆွေးနွေးရာ၊ သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်ဖို့ရာ ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နိုင်ငံ့ရေးရာများပါ ကပွဲတက်ရောက်လာသူအချင်းချင်း ဆွေးနွေးကြတယ်လို့တောင် မှတ်ရပါတယ်။မျက်နှာဖုံးစွပ်များနောက်က တွေ့ဆုံမှုဟာ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းမှာအမှန်ပါပဲ။ အလွှာမတူတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းနှစ်ခုက ပေါ်ထွက်လာတဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်း အမြောက်အမြားလဲ ရှိလိမ့်မယ်လို့ အတွေးနယ်ချဲ့မိပါသေးတယ်။ ကြည့်ရုံနဲ့ ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်းမသိနိုင်တဲ့ ဒီလိုပွဲမျိုးမှာ မကောင်းမှုလုပ်တဲ့သူတွေလဲ ရှားမယ်မထင်ပါဘူး။
ဒီနေရာမှာ Mardi Gras Carnival တွေအကြောင်းနဲနဲ လျှာရှည်ချင်ပါတယ်။ Mardi Gras ဆိုတာ ရှေးတုန်းက ရောမမြို့က ဘာသာမဲ့တွေရဲ့ ရိုးရာပွဲတမျိုးပါ။ ခရစ်ယန်ဘာသာ ရောမကို ပျံ့လာတဲ့အခါ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေက ထင်ရှားတဲ့ရိုးရာပွဲကို ခရစ်ယန်တွေရဲ့ ဥပုသ်လ မတိုင်မီ ပွဲတော်ကြီးတခုအနေနဲ့ ကျင်းပကြပါတယ်။
ခရစ်ယန်ဘာသာ တခြားဥရောပနိုင်ငံများကို ပျံ့ပွါးလာတာနဲ့အမျှ Mardi Gras Carnival တွေကို ပြင်သစ်၊ဂျာမဏီ၊ စပိန်၊ အီတလီစတဲ့ နိုင်ငံများမှာ ကျင်းပလာကြပါတယ်။ ဒါကိုကြည့်ရင် Mardi Gras ဆိုတာ ဘာသာရေးနဲ့ပက်သတ်တဲ့ ပွဲတမျိုး ဖြစ်ပြီး Masquerade Ball ကတော့ လူ့ရေပေါ်ဆီတွေရဲ့ ကပွဲတမျိုးပါ။
တချို့သော အင်တာနက်စာမျက်နှာများက Mardi Gras ကို နိုင်ငံအမျိုးမျိုးက ပုံသဏန် မျိုးစုံနဲ့ကျင်းပရာမှာအီတလီနိုင်ငံ ဗင်းနစ်မြို့မှာတော့ Masquerade Ballအနေနဲ့ ထင်ရှားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။( သေသေချာချာသိတဲ့ သူများ Comment box မှာရေးသွားကြပါအုံး။ )
သမိုင်းတွေ ခဏထားပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ရာစုနှစ်တွေက မျက်နှာဖုံးစွပ် ကပွဲတွေမှာ ဝတ်တဲ့ မျက်နှာဖုံးအမျိုးအစားတွေနဲ့ အဝတ်အစား ဖက်ရှင်တွေအကြောင်း ဆက်ရအောင်ပါ။
Posted by Adora etc. at 05:462comments:
Labels: Fashion.etc, Singapore.etc
အရောင်တောက်တောက်တွေ ခေတ်တုံးပြီလားတော့မသိ။ ကျွန်းနိုင်ငံလေးရဲ့ ဇွန်ဈေးရောင်းပွဲကြီးမှာ အဝါရောင် ဂါဝန်တထည်ဝယ်ဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ဆို အနားမကပ်နိုင်တဲ့ တံဆိပ်က ၇၀% ဈေးချတော့လဲ trend တွေဘာတွေ မတွေးတော့ပါဘူး။ ဖက်ရှင်ဆိုတာ ပြန်လည်တာပဲမှတ်လား။
ဝယ်ပြီးတော့ ဘာနဲ့ဘယ်လိုတွဲဝတ်ရမလဲ စဉ်းစားမိတဲ့အချိန်မှာ စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဖက်ရှင်၂မျိုးက ဒီမှာပါ။ညနေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Night out သွားဖို့ နဲ့၊ weekend ဖက်ရှင်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးပါ။ အေးတဲ့ ရာသီမျိုးမှာတော့ ခြေအိပ်အမည်း ဒါမှမဟုတ် legging အမည်း နဲ့တွဲဝတ်နိုင်ပါတယ်။ အဲလို တွဲဝတ်မယ်ဆိုရင် ဂါဝန်ကအရမ်းကြီးရှည်မနေဖို့တော့ လိုတယ်နော်။
ဒီပုံကတော့ ဝယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Forever New က အဝါရောင် ဂါဝန်လေးပါ။
Posted by Adora etc. at 08:36 No comments: